Gudoomiye Geeda-qorow & Taliyaha Booliska Dhuusamareeb oo qarax ka badbaaday | Dhacdo
Gudoomiye Geeda-qorow & Taliyaha Booliska Dhuusamareeb oo qarax ka badbaaday
Ciidamada ammaanka ayaa maanta fashiliyay qarax la soo dhigay agagaarka Saldhiga Booliska ee Magaalada Dhuusamareeb, iyadoo qaraxa la sheegay in la doonayay in lagu dhibaateeyo masuuliyiin.
Taliyaha Saldhiga Booliska ee Dhuusamareeb, Nuur Cilmi Maxamed oo galabta la hadlay Saxaafadda ayaa marka hore sheegay in dadka deegaanka ay qaraxaasi ku soo wargeliyeen laamaha ammaanka, sidaasina ay uga hawlgaleen.
Taliyaha ayaa sheegay in Ciidamada Miino Baarista ay la kaashadeen, sidii qaraxaasi loo kala fur furi lahaa, isla-markaana ay ku guuleysteen.
Taliyaha oo faah faahiyay goobta qaraxa la soo dhigay iyo sida uu ugu dhowdahay Saldhiga Booliska ayaa yiri “Meel saldhiga u jirta 200 oo tilaabo ayaa lagu qabtay qaraxa. Waa meel runtii dhul la’isku hayay, bulsho badan ay mar walba isugu imaan jireen oo dad shacab ah ay isku hayeen. Gudoomiyaha Degmada, aniga iyo Ciidamada Booliska waa meel aan mar walba taggi jirnay.”
Taliyaha ayaa intaa ku daray in qaraxa uu ahaa mid la doonaayay in lagu dilo isaga iyo Gudoomiyaha Degmada Dhuusamareeb, Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed (Geeda-qorow), haddii socodkoodu uu halkaasi ku badnaa.
“Barnaamijka waxaan u aragnay mid looga faa’iideysanayo taggitaankii aan taggi jirnay, laakiin Alle mahadii ayaga dhagartoodii anaga taanadiiyaa ka sahlanaatay oo anagaa kala hormanay oo fashilinay.” Ayuu yiri Nuur Cilmi Maxamed, Taliyaha Saldhiga Booliska ee Dhuusamareeb.
Taliyaha ayaa xusay in cadowga ay suurtagal tahay in uu la jooggo Magaalada Dhuusamareeb, isagoona shacabka deegaanka ka codsaday inaanay guryahooda ku haysan, kuna soo wargeliyan hay’adaha amniga, si ay sharciga ula tiigsadaan.
26-kii bishii November ayay ahayd markii ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen nin la sheegay in uu qarax soo dhigay meel ku dhow koley ay qaadka ku iibiyaan haweenka.